News Collection: पहिरनले चर्काचर्की
मुम्बई (एजेन्सी), फाल्गुन ७ - 'कहो ना प्यार है' बाट बलिउडमा पाइला हाल्नुअघि अमिषा पटेल अर्थशास्त्रकी उत्कृष्ट विद्यार्थीका रूपमा चिनिएकी थिइन् । पहिलो फिल्म नै हिट भएपछि उनी अभिनयमै रमाउन थालिन् । लभस्टोरी फिल्मबाट डेब्यु गरेकी उनका 'गदर', 'हमराज' पनि निकै चले । र उनले पनि आफ्नो शालीन छविलाई बचाइराखिन् । पछिल्लो समय त्यति फिल्म पाउन छाडेकी तिनै अमिषा केही दिनयता पहिरनका कारण विवादमा तानिएकी छन् ।केही दिनअघि मात्रै एउटा वैवाहिक समारोह अघिको संगीत उत्सवमा पुगेकी अमिषाको उदार पहिरन शैलीमा 'अग्निपथ' का ब्याड ब्वाई सञ्जय दत्तले हस्तक्षेप गरेपछि कुरो नारी अधिकारवादीसम्म तानिएको छ ।
छातीको अधिकांश भाग उदांगो पारेर उत्सवमा पुगेकी अभिनेत्रीलाई सञ्जयले त्यसो नगर्न भन्दै उनको कम्मरको दुपट्टालाई छाती छोपिने गरी बेरिदिएका थिए । सञ्जयको उक्त व्यवहारले असजिलो महसुस गरेकी अमिषाले त्यो आफूलाई अनावश्यक रूपमा छुने प्रयास रहेको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
त्यति मात्रै नभई, उनले आफ्नो त्यो पहिरन सहितको तस्बिरलाई टि्वटरमा पनि साझेदारी गरी त्यसको प्रतिक्रिया मागेकी थिइन् ।
तर सञ्जयले भने आफूले उनलाई बहिनी ठानेर त्यस्तो गरेको बताएका छन् । हुन पनि सञ्जयकी पत्नी मान्यता र अमिषा मिल्ने साथी हुन् । तर महिला अधिकारवादीले भने यति
बेला यसलाई ठूलो इस्यु बनाएर चर्काउन खोजेका छन् । 'किन पुरुषहरू सधैं महिलाको पहिरनबारे टीकाटिप्पणी गर्छन् ?' एकजना महिला अधिकारवादी तथा वकिलले कडा स्वरमा भनेकी छन्, 'के तिमी त्यसैगरी एक महिलाले पुरुषको पहिरनबारे कुरा उठाए सुन्न तयार हुन्छौ ? इतिहासदेखि सधैं पुरुष नै आफ्नो चासोको विषय होस् वा नहोस्, महिलालाई हस्तक्षेप गर्न उद्यत छन् ।' अर्की महिला अधिकारकर्मीले पनि सञ्जयको व्यवहारप्रति असहमति जनाएकी छन् । 'के लगाउने वा के नलगाउने, व्यक्तिगत इच्छा हो । जसलाई जे सहज लाग्छ, त्यही लगाउँछ ।'
यति बेला सञ्जयले चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेको छ । अभिनेत्रीहरूदेखि फेसन डिजाइनरहरूसम्म यतिबेला पुरुषको 'दोहोरो चरित्र' को खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । मिस इन्डियाकी एउटी प्रतिस्पर्धीले पुरुषहरू भित्रभित्रै ग्ल्यामरस र यौनिकता खोजे पनि बाहिर भलाद्मीको स्वाङ गर्ने 'डबल स्टान्डर्ड' का हुने आरोप लगाएकी छन् । तर यो वादविवादमा चलेका नायक/नायिका वा फिल्मकर्मी भने संलग्न हुन चाहेका छैनन् । विवाद चर्किने देखेपछि अमिषाले शनिबार सञ्जयले आफूलाई आपmनी बहिनीलाई जस्तै व्यवहार देखाएको भनाइ सार्वजनिक गर्दै त्यसको बचाउ गर्न खोजेकी छन् । भनेकी छन्, 'उनी सधैं मेरो रक्षा कवज जस्तै हुने गर्छन् । त्यसैले पनि हाम्रो सम्बन्ध मजबुत छ जसलाई यस्ता सानातिना घटनाले बिगार्न सक्दैन ।'